Wasiirka G/dhiga DFS Cabdixakiin Xaji Fiqi oo kormeer ku tagay deegaanka Qalimoow
Afgooye:-Wasiirka G/dhiga DFS Cabdixakiin Maxamuud Xaji Fiqi iyo saraakiisha milateriga ee ciidanka DFS ayaa saaka kormeer ku tagay difaacyada hore ee ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM oo ku sugan deegaano ku dhow Jowhar iyo gobalka Shabeellada hoose .
Wasiirka G/dhiga DFS Cabdixakiin Maxamuud Xaji Fiqi ayaa kormeerkiisa waxaa ku weheliyey Taliyaha ciidamada DFS C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka AMISOM waxaana uu wasiirku gaaray deegaanka Qalimoow oo ku dhow magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/Dhexe .
Taliyaha ciidamada DFS C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa waxrbixin kooban siiyey wasiirka G/dhiga ee DFS isaga oo uga warbixiyey halka ay marayaan howlgalada ay wadaan ciidanka DFS iyo kuwa AMISOM wuxuuna sheegay in ciidamada ay diyaar u yihiin in la wareegaan goobaha kale oo ay ku sugan yihiin Ururka Al-Shabaab taliyaha ayaa uga digay sidoo kale ciidanka in ay waxyeelo u geystaan shacabka .
Wasiirka G/dhiga DFS Cabdixakiin Maxamuud Xaji Fiqi ayaa waxaa uu sheegay in askarigii wax dila ama kufsi lagu qabto la toogan doono si loo fuliyo amarka Madaxweynaha DFS Xasan Sheekh Maxmuud.
Wasiirka Difaaca ee DFS ayaa sidoo kale waxaa uu u mahad celiyey ciidanka DFS wuxuuna sheegay in xuquuqda Ciidanka ay ilaalin doonto DFS wuxuuna ku amaanay sida ay ugu taagan yihiin difaaca dalka wasiirka ayaa sheegay in wasaaradiisa ay qorshaha koowaad ay fulineyso uu yahay in ay la wareegaan degmada Jowhar oo ay haatan ku sugan yihiin ciidamada Al-Shabaab.